Kitra – «Chan 2020»: nanome 300 000 Ar ho an’ny Barea ny ligin’i Bongolava - ewa.mg
News - Kitra – «Chan 2020»: nanome 300 000 Ar ho an’ny Barea ny ligin’i Bongolava
Niatrika lalao fitsapana, nikatrohana tamin’ny ekipa voafantin’i Bongolava, tany amin’ny kianja Tsiroanomandidy, ny alahady lasa teo, ny Barean’i Madagasikara, hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, natokana ho an’ireo mpilalao tsy matihanina na ny “Chan 2020”. Tamin’izany no nanoloran’ny ligin’i Tsiroanomandidy lelavola 300 000 Ar ho an’ny ekipam-pirenena malagasy, hanampiana azy ireo hiatrehana ity fifaninanana ity.
Raha hiverenana kosa ny lalaon’ny roa tonta, resin’ny Barea, tamin’ny isa tokana 1 no ho 0, i Bongolava.
Mila fanamboarana ny famonoam-baolina ho an’ny Barea, izay mbola lesoka ho an’ireo lohalaharana. Ankoatra izay, tokony hamafisina ihany koa ny fiarovantena, izay somary goragora. Tsiahivina fa hiatrika an’i Mozambika ny Barea, ny asabotsy 27 jolay ho avy izao, etsy Mahamasina, eo amin’ny lalao mandroso, amin’ny fifanintsanana ho an’ity “Chan 2020” ity.
L’article Kitra – «Chan 2020»: nanome 300 000 Ar ho an’ny Barea ny ligin’i Bongolava a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 23/07/2019
Kempo/Mma – fiofanana: mpanazatra 20 nahazo traikefa
Mpanazatra 20 avy amin’ireo ligim-paritra dimy, (Analamanga, Itasy, Vakinakaratra, Matsiatra ambony, Ihorombe) no nandray anjara tamin’ilay fampiofanana sy fanamafisam-pahaizana ho an’ny taranja Kempo/Mma. Natao ny asabotsy lasa teo, tetsy amin’ny Dojang Sorang Andavamamba izany. Ny tompon’andraikitra voalohany amin’izany taranja izany eto Madagasikara, Rakotonindriana Parfait no nitarika sy nizara ny traikefany. Nizara roa miavaka tsara ny fampiofanana, an-tsoratra sy ny fampiharana, saingy niarahan’ny rehetra nanamarika ny tsy fahampian’ny fotoana nizoran’ity fampiofanana ity, izay tao anatin’ny iray andro ihany. Na teo aza izany, samy afa-po tamin’izany ireo mpanazatra nandray anjara. Nohamafisin-dRakotonindriana Parfait, fa ezahina hisy ny fihaonana sy fifampizarana toy izao, indray isan-taona farafahakeliny. Tamin’ity fotoana ity no namelabelarana sy nanoroana ireto mpiofana ny mahakasika ny tena andraikitry ny mpanazatra, mialoha, mandritra ary aorian’ny ady. Namaranana ny fiofanana ny fizarana antontan-taratasy mari-pankasitrahana ho an’ireo rehetra nandray anjara tamin’izany. Mi.RazL’article Kempo/Mma – fiofanana: mpanazatra 20 nahazo traikefa a été récupéré chez Newsmada.
Fampidiran-ketra : 1,61 % ihany ny avy amin’ny vola miditra
“Inona ny politika momba ny hetra hampivoatra an’i Madagasikara ?”. Niainga avy amin’io lohahevitra io ny fiaraha-nidinika nataon’ny tompon’andraikitra samihafa, avy amin’ny fanjakana, ny tsy miankina, ny fiarahamonim-pirenena, ny faran’ny herinandro lasa teo.Ambany dia ambany ny tahan’ny fampidiran-ketra eto amintsika, manodidina ny 12 %, raha efa mahita 15 % ny firenena sasany aty Afrika, samy eo an-dalam-pandrosoana. « Tsara ho fantatra anefa fa misy olona 13 tapitrisa azo takina hetra eto Madagasikara. Ireo olona ireo anefa, miaina ao anatin’ny fahantrana. Afaka mandoa hetra izy ireo raha mihatsara ny fari-piainany », araka ny fanamarihana nataon’ny solontenan’ny fiarahamonim-pirenena iray CCOC (1), Radert Ony.Tsy hita taratra ny fandoavan-ketra raha avy amin’ny vola miditra na ny IR (Impôt sur le revenu). « Ambany indrindra ny IR avy amina orinasa na avy amin’ny isam-batan’olona », hoy ny tale jeneralin’ny hetra, i Germain. Tsy misy afa-tsy 1,61 % ny IR na 51,3 miliara ariary ny taona 2018, amin’ny hetra rehetra miditra, araka ny tarehimarika navoakan’ireo mpanao fanadihadiana momba ny toekarena, Crem (2). Andraisan’ny fanjakana volabe indrindra hatramin’izao ny TVA, 39,14 %.Tsy mazava ny fampiasam-bolaTsy mazava ny fampiasam-bolam-panjakana ary tsy hita firy ny fiantraikan’izany eo amin’ny fiainana andavanandro. Raha ny fahitan-dry zareo mpandaha-teny azy, 4,88 % avy amin’ny hetra ihany ny hoentina mampihena ny elanelana eo amin’ny lafiny sosialy; 12,20 % ny mba mandeha any amin’ny asa fampandrosoana, manamarina izany ny fiandrasana famatsiam-bola avy any ivelany. Izay tsy fahitana ny fiantraikany izay no anisan’ny tsy mampazoto ny Malagasy mandoa hetra.Ezaka lehibe, noho izany, ny fanentanana ny olom-pirenena handoa hetra. Tsy vita ao anatin’ny fotoana fohy izany fa lavitra ezaka. « Mikendry hahatratra 15 % amin’ny taona 2023 ny fitondrana amin’izao fotoana izao fa mila mangarahara ny hahatongavana amin’izany », hoy ny tale jeneraly, i Germain.Somary natsahatra ny volana mey teo aloha ny fanaraha-maso momba ny hetra. Nilaza ny ao amin’ny foibe misahana izany fa manao fandaminana mialoha ny hanohizana azy, izay mbola tsy nambara. Jerena avokoa ny lafin-javatra rehetra. R.Mathieu CCOC (1) : Collectif des citoyens et organisations citoyennesCrem (2) : Cercle de réflexion des économistes de MadagascarL’article Fampidiran-ketra : 1,61 % ihany ny avy amin’ny vola miditra a été récupéré chez Newsmada.
Faha-90 taon’ny RNM: ny zoma izao no ivon’ny fankalazana
“Ny mari-drefy tena tsara, radio Madagasikara”. Teny fanevan’ny Radio nasionaly malagasy na ny Radio Madagasikara, ao anatin’ny fankalazana ny faha-90 taony amin’ity taona ity, io. Hotontosaina ny zoma ho avy izao ny ivon’ny fankalazana, etsy amin’ny tokotaniben’ny ORTM Anosy. Lanonana hanaovana ny jery todiky ny 90 taona nolalovan’ity onjampeo nasionaly ity. Hitarafana ny hoaviny ihany koa satria mivoatra manaraka ny rivotra mitsoka ihany koa ny RNM.Efa nisy ny fanombohana ny hetsika toy ny fifaninanana sary famantarana sy ny teny faneva. Hotontosaina amin’io lanonana io ny fanomezana loka ireo nandresy. Hisy koa ny tranoheva ho fampirantiana, hamantarana bebe kokoa ny tantaran’ny RNM. Anisan’ny nampiavaka sy mbola ankafizin’ny Malagasy amin’ny RNM ny tantara fihaino. Vao mainka homen-danja izany ankehitriny satria fantatra fa hisy ny “studio” vaovao sy maoderina hatokana ho an’ny fandraisam-peo, hotokanana ihany koa mandritra ny lanonana. Nampitondraina ny anaran’i Vahandanitra, mpilalao sy mpamorona tantara, anarana tsy afa-misaraka intsony amin’ny an’ny RNM, io. Hofaranana amin’ny fampisehoana ny fotoana ny hariva ka hisy ny tapakila zaraina amin’ireo mpihaino mandray anjara amin’ny lalao ao amin’ny RNM. Handeha mivantana amin’ny onjampeo ihany koa ny hetsika rehetra.Zo ny AinaL’article Faha-90 taon’ny RNM: ny zoma izao no ivon’ny fankalazana a été récupéré chez Newsmada.
I Madagasikara sy ny Vondrona eoropeanina: Iaraha-midinika ny haba sy ny isan’ny sambo mpanjono
Mitohy, omaly sy anio, ny dinika eo amin’i Madagasikara sy ny Vondrona eoropeanina (UE) momba ny jono aty amin’ny fari-dranomasin’i Madagasikara. Efa nifantoka amin’izany ny filankevitry ny minisitra, ny 26 mey teo, hanitsiana ny haba tokony haloan’ireo sambo eoropeanina, araka ny tahan’ny haba vaovao nofaritana tamin’ny filankevitry ny minisitra natao ny 2 mey 2021. Faritana ihany koa ny isan’ny sambo mahazo alalana manjono aty amin’ny fari-dranomasin’i Madagasikara. Hamafisina amin’ny fiaraha-midinika ny ventin-kevitra tamin’ny filankevitry ny minisitra ny amin’ny fiandrianam-pirenena mamaritra ny fari-dranomasina ahafahana manjono.Hampahafantarina ny UE ny tapaky ny fanjakana malagasy momba ny lalàna mifandraika amin’ny haba tokony haloa mandritra ny herintaona; toy izany koa ny fanomezana fahazoan-dalana. Miainga avy amin’izany ny fijerena isan-taona ny haba tokony haloa sy ny hamerana ny isan’ny sambo mpanjono miditra amin’ny fari-dranomasina eto an-toerana.Tamin’ny 2014 ny sonia fifanarahana farany momba ny jono eo amin’i Madagasikara sy ny UE, ary efa nifarana tamin’ny 2018. Hatramin’izay, tsy nisy zavatra tapaka. Sarotra amin’ny roa tonta ny nahita marimaritra iraisana amin’ny haba tokony ho naloa amin’ny vokatra azo sy ny isan’ny sambo mahazo manjono. Ka amin’izao fiaraha-midinika vaovao izao, hahita izay fiombonan-kevitra izay ve ny roa tonta? Ny UE eto no resahina fa mbola ao ireo sambo vahiny hafa miditra antsokosoko eto sy manapotika ny jono madinika. R.Mathieu L’article I Madagasikara sy ny Vondrona eoropeanina: Iaraha-midinika ny haba sy ny isan’ny sambo mpanjono a été récupéré chez Newsmada.
Fanahiana valanaretina: raikitra ny fitiliana amin’ny mety ho fidiran’ny “Ebola”
Maty ilay olona voan’ny aretina Ebola tany amin’ny tanàna lehibe iray Goma, any atsinanan’i Kongo, rehefa saika hafindra toerana tany Butembo, omaly, araka ny vaovao nampitain’ny tomponandraikitry ny faritra Kivu Avaratra, i Carly Nzanz. Tanàna lehibe iray ifamezivezen’ny olona maro i Goma ary betsaka ireo mivoaka ho any amin’ny firenena hafa ivelan’i Kongo miainga avy ao. “Mampanahy ity tranga voalohany izay namoy ny ainy ity noho izany”, hoy ny tomponandraikitry ny Crox Rouge any an-toerana, i Gwen Eamer, raha nanontanian’ny mpanao gazetin’ny fahitalavitra France 24. Tanàna ahitana ireo toeram-piasan’ny sampandraharahan’ny Firenena mikambana sy ny raharaham-barotra goavana rahateo ity nitrangan’ny aretina voalohany. Miantso ny vahoaka ao aminy ho tony ny fitondrana kongoley. 60 ireo olona nifampikasoka tamin’ilay pasitera narary voalohany ary efa vita vaksiny ny antsasa-manila amin’izy ireo, efa eo an-dalana hanaovana izany ny ambiny. Mbola miandry 21 andro ny tomponandraikitra hitiliana na namindra tamin’ny olon-kafa ilay olona maty tany Goma.Nanomboka ny volana aogositra 2018, fotoana nilazana ny valanaretina, efa 1 665 ireo maty noho ny Ebola any amin’ny Kivu Avaratra. Nampitsahatra ny asany any amin’io toerana io ny ekipan’ny Médecins sans frontières noho ny tsy fandriampahalemana.Nanomboka ny volana aogositra 2018, anarivony ny aina avotra vokatry ny fampiasana ilay vaksiny rVSV-ZEBOV miaro amin’ny aretina Ebola novokarin’ny laboratoara amerikanina Merck.Miasa 24 ora ny ekipa eny amin’ny seranana Eto Madagasikara, mandalo fitiliana avokoa ny mpandeha nidina avy amin’ny fiaramanidina avy any ivelany taorian’ny famenoana ny taratasy momba ny toeram-piaviany sy ny toe-pahasalamany. Ho an’ny polisy sy ny mpiasan’ny fahasalamana ireo taratasy ireo ahafahana mahafantatra ny toeram-piavian’ilay mpandeha sy ny adiresy misy azy rehefa tonga eto. Manana efitra fanokanana ny seranam-piaramanidina ho an’ireo olona ahina mandray zotra avy any ivelany rehetra, misy ekipan’ny minisiteran’ny Fahasalamana tsy tapaka manara-maso ny mpandeha rehetra. “Vonona koa ny ambulance manokana hitondrana ny marary ho any amin’ny tobim-pahasalamana raha ilaina”, hoy ny talen’ny fampiroboroboana ny fahasalamana ao amin’ny minisiteran’ny Fahasalamana, Rakotoarivony Manitra, omaly. Tafiditra amin’ny règlement sanitaire international (RSI) tokony hampiharin’ny firenena rehetra ireo, araka ny toromariky ny OMS iarovana ny fahasalaman’ny mponina. Hatreto aloha, tsy nahitana tranga nampiahiahy ny mpandeha avy any ivelany tonga teny amin’ny sambo na ny seranam-piaramanidina.Vonjy A.L’article Fanahiana valanaretina: raikitra ny fitiliana amin’ny mety ho fidiran’ny “Ebola” a été récupéré chez Newsmada.
Poizina… tsy ampoizina
Izay no maha poizina ny poizina? Famitahana tsy ampoizina, na hoe saika voafitaka hatrany amin’ny tsy ampoizina izay voapoizina. Raha tsy efa dia minia mikimpy amin’ny fanapoizinan-tena na famonoan-tena, sanatria, izay voapoizina. Resaka hafa izay. Tsy karazana poizina atao am-pitaka amin’ny firenena ve, ohatra, ny teti-dratsin’ny sasany hifofo ny ain’ny tomponandraiki-panjakana ambony sy ny ain’ny filohan’ny Repoblika? Fitaka bevava amin’ny famonoana mpitondra, fanonganam-panjakana, fanakorontanana firenena… hahazoana fahefam-panjakana noho ny tombontsoa manokana.Tsy iza tsy iza no nety sy nanaiky izany fa Malagasy ary tsy aiza tsy aiza fa eto Madagasikara. Na hoe misy vahiny aza, heverina ho akaiky fa tsy lavitra na fantatra amin’ny asa mahaza-dratsy azy etsy sy eroa eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Nefa na ahoana na ahoana fandehan’ny famotorana sy ny fitsarana, na inona na inona vokatr’izany, heverina ho tsy meloka hatrany aloha izay voasaringotra amin’ny raharaha raha tsy mivoaka ny didim-pitsarana fanamelohana. Izay no itandremana amin’izay lazaina sy avoaka, sao miampanga tsy amin’ny antony olon-tsy meloka.Amin’ny poizina… tsy ampoizina, tsy andrasana hahafaty sy hahavoafitaka ny tena vao hoe poizina? Eny, na heverina ho tsy hahafaty ny tena aza, ohatra, ny zava-drehetra na izay poizina aza, satria tsy sotroina na hohanina, ohatra, na tsy hetsehina eo amin’ny toerana misy azy. Nefa ny poizina dia poizina, na tsy mifandray na miditra amin’ny tena aza. Mila fitandremana be? Misy hatrany ny karazana poizina tsy ampoizina: olona, vondrona, firenena… Ny tena no mitandrina, manadihady, mitsapa, manandrana; raha ilaina aza, tsy mifandrairay na fiarovan-tena ny fifandraisana aminy.Tena misy ny poizina tsy ampoizina? Tsy vaovao, akaiky, miserasera amin’ny tena, mitankisina, miara-miasa… tsy ampoizina. Na ahoana na ahoana, mamitaka mandrakariva ny poizina, raha tsy efa dia mamono tena ny tena. Ary ny poizina tsy avy na tsy manao ny asany raha tsy mamitaka, manambaka, mandrava, mandemy, mamono…Rafaly Nd. L’article Poizina… tsy ampoizina a été récupéré chez Newsmada.
Fizahantany: mitohy ny fifampiraharahana
Mikatso ny fizahantany! Araka ny efa fantatra, tsy mihodina ny sehatry ny fizahantany eto amintsika satria mikatona ny sidina habakabaka, toy ny any ivelany, noho ny valanaretina Covid-19 tsy mety ho fongana. Naato amin’ny asany avokoa ny 70%-n’ny mpiasa amin’izao fotoana izao.Raha ny tamin’ny taona 2020, anisan’ny vahaolana nataon’ny fanjakana malagasy, hanampiana ny mpisehatra amin’ity fihariana ity ny fanemorana ny fotoana fandoavana ny hetra sy ny haba, ny faktioran’ny Jirama, ny vola indramina any amin’ny banky, sns, mba hanamaivana ny vola mivoaka satria tsy misy ny vola miditra.Mitohy izany olana izany, amin’izao taona 2021 izao. Nilaza ny mpikambana ao anatin’ny Vondron’ny federasiona misehatra amin’ny fizahantany eto Madagasikara (CTM) fa mitohy ny fifampidinihana amin’ny sampandraharaham-panjakana isan-tsokajiny.Tafiditra ao anatin’izany koa ny fifampiraharahana amin’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana sosialy (CNaPS), mikasika ny latsakemboka fandoa mahazatra. Eo koa, ilay fampindramam-bola ho an’ny mpiasa natao tamin’iny taona 2020 iny, nefa tokony haloa manomboka amin’ity volana janoary ity. Tsiahivina fa manodidina ny 200.000 Ar hatramin’ny 500.000 Ar ny vola nampindramin’ny CNaPS, ho an’ireo mpiasa amin’ny fizahantany, nisedra olana, vokatry ny Covid-19.Njaka A.L’article Fizahantany: mitohy ny fifampiraharahana a été récupéré chez Newsmada.
Loza an-dranomasina :: Olona fito maty narendriky ny botry
Rendrika ny botry na lakana lehibe iray tany Maintirano, afak’omaly tolakandro. Namoy ny ainy ny mpandeha fito tao anatiny. Avotra kosa ny mpanamory sy ireo mpandeha valo ambin’ny folo hafa. Olona roa no mbola karohina hatramin’ny omaly. Anisan’ireo nindaosin’ny fahafatesana tamin’io voina an-dranomasina io ny delegen’i Besalampy sy ny zanany roa miaraka amin’ny zanadrahavaviny, zandary sy mpampivelona iray. Ahitana zaza vao roa taona monja amin’izy ireo. Niainga tao Maintirano, afak’omaly maraina, ny botry antsoina hoe “Nany” ary nitondra olona telopolo. Tradoza teo am-pidirina ny vinany Tambohorano izy, tokony ho tamin’ny telo ora tolakandro. Vaky nizara roa mihitsy io fitaovam-pitaterana io noho ny hamafin’ny onjandranomasina. “Avotra ny mpandeha iray ka afaka nampandre ny zandary. Iretsy farany indray no niainga niaraka tamin’ny sambo kely haingam-pandeha roa hanavotra ireo niharamboina. Voatery natsahatra kosa ny fikarohana, ny alina, noho ny tsy fahampian’ny hazavana”, araka ny fampitam-baovao avy amin’ny zandary any Maintirano. Fanavotan’ny sila-kazo Notohizana vao maraimbe (Naotin’ny fanoratana: omaly) ny fikarohana tany anaty rano. Niara-nisalahy ny fokonolona sy ny mpitandro ny filaminana. Hita nitsingevana teny ambony rano niaraka tamin’ny ambin’ ny hazo tamin’ilay botry ny olona sivy ambin’ny folo. Anisany tamin’ireo ny mpanamory sy ireo roa lahy mpanampy azy ary ny zandary iray. Hita faty natosiky ny rano teny an-tsisin-dranomasina ny mpandeha fito. “Avy namita iraka nitondra olona tany amin’ny Fitsarana tany Maintirano ary nikasa hamonjy fodiana any Besalampy ireo zandary telo lahy anisan’ireo niharamboina. Avotra ny iray raha namoy ny ainy ny faharoa ary tsy mbola hita ny fahatelo sy ny ankizivavy mpianatra iray”, hoy ihany ny zandary. L’article Loza an-dranomasina :: Olona fito maty narendriky ny botry est apparu en premier sur AoRaha.
Tsy nipoitra i Andrianjato sy i Guy Maxime: nantsoin’ny zandary i Soava sy Jean Claude “Tambatra”
Hiroso amin’ny dingana manaraka ny mpitandro filaminana. “20 andro tsy nody an-trano i Guy Maxime raha ny nambaran’ny vadiny tamin’ny fanateran’ny zandray taratasy teny an-tranony”, hoy ny lehiben’ny sampana fikarohana heloka bevava etsy Fiadanana, ny Kly Ravelomanana Tahina, omaly, raha nanontaniana. Tokony ho tonga eny anivon’ny zandary, omaly tamin’ny 9 ora, araka fampiantsoana azy, Ralaiseheno Guy Maxime, saingy tsy nipoitra. Anisan’ny anton’ny fampiantsoana ny fiahiahiana ity ben’ny Tanàn’Ankaraobato teo aloha ity ho namoaka vaovao manohintohina ny filaminam-bahoaka, mety hitarika mihitsy ho any amin’ny fankahalana ireo mpitondra fanjakana.Zo ny maneho hevitra ary ho avy ny fotoanaMitory azy amin’izany ny fanjakana amin’ny alalan’ny “Directeur de la législation et contentieux – DLC”.Na izany aza, niditra an-telefaonina tao amin’ny fandaharana « Miara-manonja » ity mpikambana Tim teo aloha ity, omaly, ary nilaza fa nanambara ny marina tao anaty fahasahiana ny tenany. « Niovaova ny vaovao nivoaka momba ilay volamena ary maro ireo niezaka nanadio izany. Ireo pirina ihany no tratra farany… Miverimberina ny fanitsakitsahana ny lalàmpanorenana sy ny lalàna. Efa naneho fahavononana ary efa nijoro sy tsy hanaiky lembenana manoloana ny tombontsoa iombonana izahay. Fanjakana manao hitsin-dalana io ka handraisan’ny Malagasy fepetra… Zontsika ny maneho hevitra manoloana ny fahalovana ka ho avy ny fotoana ary tsy ho ela intsony”, hoy izy.Hiditra an-tsehatra ny fitsarana raha…Efa nandefasana taratasy tahaka izao koa ny minisitra teo aloha ny Serasera, Andrianjato Vonison, saingy tsy hita nanjavonana ny 9 feboary teo. Niditra an-telefaonina koa ny tenany, omaly, ary nilaza fa miandry ilay hiaka tokana ny vahoaka. “Efa tsy mandeha intsony izao raharaha izao… Vao mainka hampitombo ny trosantsika sy hampihotsaka ny volantsika io fitrosana amin’ny FMI io ary hampikorontana eto…”, hoy izy.Manoloana izany, handefa fiantsoana azy mirahalahy ireo indray ny eo anivon’ny zandary ka anjaran’ny fitsarana ny mandray andraikitra aorian’izany raha tsy mbola mipoitra eny Fiadanana izy ireo amin’ny fe-potoana homena.Etsy andaniny, voaantso hatao fanadihadiana eny Fiadanana koa anio, amin’ny 9 ora i Jean Claude Andrianirina sy Soava Andriamarotafika, samy mpanao gazety amin’ny Tambatra. Andrasana avokoa ny ho tohin’izany.Synèse R.L’article Tsy nipoitra i Andrianjato sy i Guy Maxime: nantsoin’ny zandary i Soava sy Jean Claude “Tambatra” a été récupéré chez Newsmada.
Technologies : 78% des enfants utilisent Internet
Les participants à la session de formation contre l’AESEL Plus de la moitié des mineurs sur les 1 500 enquêtés par l’ONG Ecpat France utilisent Internet. 50% d’entre eux ne sont pas sous la surveillance des adultes au moment où ils sont connectés. Les enfants utilisent fréquemment Internet pour apprendre, communiquer, partager des contenus, jouer ou encore s’amuser. Ces activités ont lieu de plus en plus souvent loin de l’ordinateur familial, sur des appareils mobiles comme les smartphones et les tablettes. Bien que les parents peuvent diriger l’enfant vers des contenus intéressants, amusants et adaptés à son âge, 50% des enfants enquêtés ont indiqué ne pas être dirigés quand ils surfent. C’est le résultat des études menées par l’ONG Ecpat France sur 1.500 enfants et 500 adultes qui ont eu lieu dans six villes de Madagascar dont Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Toliara, Nosy-Be et Taolagnaro. « Nous encourageons les parents à surveiller de près les activités de leurs progénitures sur Internet. Avec le développement de la nouvelle technologie, l’exploitation sexuelle des enfants à travers Internet est un phénomène qui nécessite une prise de responsabilité », selon Tokinirina Rakotoarimanana, formateur auprès de l’Ecpat France. Ces points ont été évoqués hier durant la formation des acteurs sur la terminologie relative aux Abus et exploitations sexuels des enfants en ligne (AESEL) dans le cadre du projet PAESEL ou Prévention des abus et exploitations sexuels des enfants en ligne conduit par Ecpat France et appuyé par l’UNICEF. Risques. L’utilisation des médias sociaux peut présenter certains risques. Cette étude réalisée par l’Ecpat France a permis d’apprendre que 44% des enfants enquêtés ont indiqué avoir été victimes de l’un des cinq types d’abus et exploitations sexuels en ligne comme l’online grooming, le sexting, la sextorsion, le live streaming d’abus sexuels ainsi que l’abus sexuel à partir d’une webcam, messenger ainsi que toutes les plateformes où l’on peut visionner des vidéos. Le chef du service de la législation auprès de la direction des études et des réformes législatives du ministère de la Justice, Vololoniaina Rakotonirina a indiqué que pour renforcer davantage la protection des enfants contre l’AESEL, il est primordial de faire une large diffusion de ces guides terminologiques auprès des acteurs concernés par la protection des enfants. C’est également dans ce sens que des sessions de formation seront organisées dans les six villes d’intervention du projet. Narindra RakotobeL’article Technologies : 78% des enfants utilisent Internet a été récupéré chez Midi Madagasikara.